Global Myanmar Spring Revolution Rally in Tokyo (12th Sep)
「GMSRは外交の戦いを要求した」 9月12日、東京において、ミャンマー政府の統一政府 (NUG) を支援するため、TTAJ とR.T.M (メンバーやボランティアを含む約200名) は、「ミャンマーの春革命グローバルラリー」 に主要な行進グループの一つとして参加致しました。 第76回国連総会は、世界中からミャンマーを代表する政府と代表団を選出します。
⭐️①　東京都では感染率が高くなっているため、体温計やアルコール・ハンドゲルなどのCOVID 19用保護具
④ GMSR バッジ 小雨の中、参加してくださった皆様に深く感謝申し上げます。🙏🥰
UN (国連)国民統一政府を承認, 軍政を否認。
" Ambassadorial War Cry from GMSR”
On the 12nd of September, TTAJ and R.T.M(around 200 people including members and volunteers) participated in Global Myanmar Spring Revolution (Tokyo) as one of the Major Marching groups inaGlobal Myanmar Spring Revolution Rally in Tokyo.
The new representative Government and Ambassador will be elected by the nations all around the world at 76th UN General Assembly. Hence to make sure the true voices of People are heard, we Myanmar Citizens from all around the globe will be asking all our might!
1. Thermometers for measuring body temperature and alcoholic hand gels as precatious measures since the CORONA infectious rate in Tokyo is getting higher. 2. Red armband
3. Preparation of White Masks
4. MSR logo badge
We would like to express our deepest gratitude to our beloved volunteers who came and joined under this dizzle . It shook to our cores when we experienced non-stop shouting and marching to express patriotism.
"သံတမန်ရေးရာတိုက်ပွဲခေါ်သံအဖြစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ခြင်း"
ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ တိုကျိုမြို့တွင်ကျင်းပသော သံတမန်ရေးရာတိုက်ပွဲခေါ်သံအဖြစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် လူဦးရေ(၂၀၀) ခန့်ပါဝင်သောအဖွဲ့လိုက်စစ်ကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် TTAJ နှင့် Revolution Tokyo Myanmar - R.T.M အဖွဲ့မှ ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ပါတယ် ။ (၇၆) ကြိမ်မြောက် အထွေထွေကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံတွင် စစ်မှန်သော ပြည်သူ့အသံ ရှိနေစေဖို့ NUG အစိုးရအား တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် ဂျပန်ရောက်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများမှ One Voice ဖြင့်ချီတက်ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
⭐️TTAJ မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့မှုများ
⭐️ ၁။ တိုကျိုမြို့တွင်ကိုဗစ်ကူးစက်သူများပြားလာသည့်အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အနေနှင့် လက်သန့်ဆေးရည်များ ထားရှိသုံးစွဲခြင်း၊ အပူချိန်တိုင်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ပြီး အပူချိန် စစ်ဆေးပေးခြင်း
၂။ လက်မောင်းစည်းအနီရောင်များ ပြင်ဆင်ထားရှိပေးခြင်း
မိုးဖွဲလေးများကျနေသော်ငြားလည်း အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ပေးကြသော TTAJ's Volunteerများ အားလုံးကို ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် 🙏🥰
နောက်ပွဲတွေမှာလည်း TTAJ အဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်နော်🤗 UN NUGလက်ခံရေး စစ်ကောင်စီကိုငြင်းပယ်ပေး 🌎